Fampandrosoana tantara - Xizi ascenseur Co., Ltd
XIZI handroso mitondra ny quintessence ny ascenseur fampandrosoana hevitra momba ny zato taona, handova traikefa sy ny teknolojia ny ascenseur orinasa maherin'ny 30 taona, tapa-kazo, ary ho zava-baovao maharitra mitana foana vita fanoloran-tena, toe-tsaina manokana sy ny raharaham-barotra concentrative fampandrosoana.
Nandritra ny taona maro, isaky ny tso-po tanany amin'ny mpanjifa, isaky ny akaiky fiaraha-miasa amin'ny mpanjifa .... rehetra ny fijoroana ho vavolombelona momba ny XIZI mialoha. Izany indrindra, satria tena tsiky ny fotoana rehetra, XIZI no tonga saina haingana ny lasibatry ny sehatra iraisam-pirenena hanitsaka amin'ny tsena anatiny.
Nanangona ambony talenta amin'ny asa sy ny fitantanana orinasa, matihanina voalohany tahan'ny fampidirana-barotra talenta, mahery vokatra ny fikarohana sy ny fampandrosoana talenta za-draharaha ary koa ny fanorenana ny teknolojia sy ny talenta, XIZI ekipa dia matoky ny hitondra tsiky ho mendri-pitokisana manerana izao tontolo izao.
Tamin'ny 2016, nandefa soa aman-tsara ny vokatra vaovao isan-karazany, anisan'izany ny karazana kapila Ultra-manify maotera sy Victor MRL (T) ascenseur amin'ny milina efitra, XEC-6000 fanaraha-maso-fiara tafiditra soa aman-tsara escalator.
Tamin'ny 2015, XIZI Industrial Park namirapiratra ao amin'ny orinasa, ny anaram-boninahitra nomena ny ambony-100 orinasa any amin'ny faritanin'i Zhejiang.
Tamin'ny 1997, XIZI Otis ascenseur Co., Ltd. naorina tamin'ny fomba ofisialy.
Tamin'ny 1996, "XIZI" niantsambotra an'i No. 1-pirenena marika eo amin'ny tsena anatiny.
Tamin'ny 1993, XIZI manondrana aloha ascenseur an'i Vietnam.
Tamin'ny 1981, tamin'ny fomba ofisialy XIZI nanorina ascenseur.